Fil d'actualités du 23/08/2019
23/08/2019 - 15:30 : SOSIALY:nanao hetsika fanadiovana faobe sy fandaminana ny teny anivon’ny tsenan’i Namontana ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanan androany maraina.
23/08/2019 - 15:00 : POLITIKA:Miantso ny rehetra ho tony ny CFM amin'ny fijoroan'ny antoko mpanohitra.
23/08/2019 - 14:30 : TOAMASINA:Miketrika fitokonana ireo mpianatry ny oniversite ny Barika dimy noho ny falafosan'ny ofantrano sy ny tsy faneken'ny tompon'andraikitra ny hihaona amin'izy ireo.
23/08/2019 - 14:00 : ASA SOA:Nanome ra maimaim-poana ho an’ireo mpiray tanindrazana amin’izy ireo ny Sampana Mpamonjy Voina ao amin'ny kaominina Antananarivo Renivohitra tetsy amin’ny tobiny Tsaralalàna ny andron’ny Zoma 23 Aogositra 2019.
23/08/2019 - 12:00 : FANATANJAHAN-TENA:Efa manao fanazarantena aminy kianja any Maurice ny FOSA amizao,vonona tanteraka handavo an'ny Pamplemousse any aminy taniny izy ireo aminy match retour ity.
23/08/2019 - 11:45 : ANTSAHAMANITRA:Nitrangana fanafihan-jiolahy teny Antsahamanitra ny maraina teo tokony tamin'ny 09 ora. Arakin'ny fampitam-baovao azo eto am-pelatananay dia fiara iray nitondra vola no narahana Jiolahy, namaly ireo mpitondra vola nampian'ireo polisy teny amin'ny manodidina. Vokany lavo ny bala ny jiolahy roa ary ny sisa tafatsoaka.
23/08/2019 - 11:30 : ASA SOSIALY:Ho esorina izay mpandoto ny tanàna, hampiharina ny lalàna.Nisy ny fivoriana notarihin’ny sekretera jeneralin’ny kaominina Antananarivo renivohitra (CUA), Randriamasinoro Tahiry Ny Riana tao amin’ny lapan’ny tanàna Analakely androany maraina 23 aogositra, amin’ny lamina vaovao: fandaminana sy fanadiovana ny tanàna manerana ny boriborintany 6 eto Antananarivo Renivohitra.
23/08/2019 - 10:30 : TSARASAOTRA IVATO:Misy andian'olona misikotra ny vato kely eny amin'ny sisin'arabe.
23/08/2019 - 10:00 : FANDRIAM-PAHALEMANA:Mpangalatra moto RSZ no maty voafitry ny polisy teo amin'ny lalamby Ampefiloha io maraina io,efa tafaverina amin'ny tompony kosa ilay moto.
23/08/2019 - 09:30 : TRANGAM-PIARAHAMONINA:Fiara 4x4 mitondra laharana takelaka mena no nandefa anjomara fanakisahana fiara omaly teny Ampefiloha be ny tafitohana ka naneho ny atezerany ka fantatra fa firan'ny Tale ny ministeran'ny fahasalamana ilay fiara ka nahazo fampitandremana avy anttrany ilay Tale.
Archive du 20181211
Tsy manaiky hampiadiana intsony Hifidy an-dRavalo ny ambany tanàna
Noporofoin’i Marc Ravalomanana kandida faha-25 sy ny vahoaka eny ambany tanàna fa tsy marina ny filazana, fa olona manavakavaka izy ary tsy tia ny vahoaka madinika eny ambany tanàna sy ny olona any amin’ny faritra, araka ny resaka voizin’ny mpampisara-bazana.
Praiminisitra sy minisitry ny atitany Miketrika mafy hampandany an-dRajoelina ?
Manao tsindry ho an’ireo tompon’andraiki-panjakana (Lehiben’ny faritra, Prefen’ny faritra, Lehiben’ny distrika,…) ny praiminisitra Ntsay Christian sy ny minisitry Atitany sy ny fitsiranjaram-pahefana Tianarivelo Razafimahefa, izay samy MAPAR,
Ny Rado Rafalimanana “Tena mila mifamela ny samy Malagasy”
Niteraka resabe teto amin`ny firenena ny adihevitra nisy tamin`i Marc Ravalomanana, filoham-pirenena teo aloha, sy i Andry Rajoelina, filohan`ny tetezamita teo aloha.
Jean Nirina HAFARI “Tokony hihaona amin’ny FFKM aloha ireo kandida roa”
Naneho ny heviny mikasika ny fampihaonana voalohany ny kandida Marc Ravalomanana laharana faha-25 sy ny kandida laharana faha-13 tao amin’ny televizionam-panjakana ny Alahady hariva teo ny filoha nasionalin’ny fikambanana Hafari Malagasy Rafanomezantsoa Jean Nirina.
Andry Rajoelina Misy tokoa ve ny IEM sa tsy voafehy ?
Tsy nisy izay tsy nahatsikaritra nandritra ny adihevitra teo amin`i Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina ny alahady lasa teo fa zara raha niresaka ny programan`asany ny filohan`ny tetezamita teo aloha.
Raha tena te ho depiote Tokony hiomana dieny izao, hoy Dany Rakotoson
Rehefa miresaka firenena demokratika isika dia tsy maintsy misy fifidianana.
Marc Ravalomanana Mipetrapetraka ny vahaolana ara-toekarena
Mipetrapetraka ny paikadin’i Marc Ravalomanana sy ny ekipany amin’ny vahaolana ara-toekarena ho an’i Madagasikara. Havadika ho “Banque postale” ny ampahany amin’ny Paositra Malagasy, izay ny 35%
Marc Ramiaranjatovo “Sarotra tanterahina ny programan`i Andry Rajoelina”
Taorian`ny adihevitra nifanatrehan'ny kandida Andry Rajoelina sy ny kandida Marc Ravalomanana, izay narahina tao amin'ny Televiziona Malagasy ny alahady 9 desambra lasa teo dia namoaka ny heviny mahakasika izay ny ben`ny tanànan`Alasora, Marc Ramiaranjatovo.
Filoha ho lany aorian’ny fifidianana Hiankinan’ny hoavin’ny mpandraharaha
Na dia nisy aza ny fihaonan’ireo filohana mpandraharaha matanjaka tamin’ireo kandida mianaka tamin’ny farany teo nanontanian’izy ireo ny hevitr’ireo kandida ny amin’ny tontolon’ny fandraharahana dia hita ho malina ihany aloha izy ireo ny amin’ny zava-misy amin’izao fotoana.
Fampandaniana an’i Dada Mitohy sy mivelatra ny “porte à porte”
Fampirantiana an’i Madagasikara avy any Paris Nijery mivantana ireo mpianatry ny EPP
Ao anatin’ny famaranana ilay fampirantiana an’i Madagasikara avy any Paris - Frantsa amin’ny alalan’ny tranokala amin’izao ireo mpikarakara dia ny fondation H sy ny Telma ary ny Groupe Axian.
Fonjaben’Antanimora Hasiam-panitarana amin’ny taona ho avy
Tafakatra avo roa heny amin’ny isa ara-dalàna ny isan’ireo voafonja tazonina etsy amin’ny fonjaben’Antanimora ankehitriny, raha araka ny fanazavan-dRakotomalala Aina Tantely, talen’ny maha olona sy ny fanabeazana ny voafonja.
Mpampivelona sy mpitsabo mpanampy Andiany faharoa 83 mianadahy no navoakan’ny UPRIM
Namoaka ny andiany faharoa amin’ireo mpampivelona sy mpitsabo mpanampy nanovo fahalalana tao aminy nandritra ny telo taona ny sekoly ambony UPRIM etsy Andavamamba.
VOTSOTRA I MALIK KARNALY
Votsotra ny alin’ny alahady teo i Malik Karmaly. Nokendren’ireo olon-dratsy mpanao kidnapping ny fandehanan’ny adihevitra tao amin’ny TVM mba hamotsorana ilay karàna izay tale jeneralin’ny orinasa Habibo.
Boriborintany fahatelo Nodiovina ny tatatra ho fisorohana ny rano miakatra
Manoloana ny mety ho fiakaran’ny rano matetika eny amin’iny faritra Mahavoky Besarety iny, indrindra amin’izao fotoam-pahavaratra izao dia nanadio ireo tatatra hivarinan’ny rano maloto ny Boriborintany fahatelo,
Goragoran’ny rafitra mpaka fako RF2 sy ny fokontany Notsikerain’ny delegen’ny boriborintany fahatelo
Manoloana ny fomba fiasan’ny rafitra mpaka fako eo anivon’ny boriborintany fahatelo na RF2 dia nitondra fanazavana mikasika ny antony maha goragora azy io ankehitriny ny delegen’ny boriborintany fahatelo, Hery Razafintsalama.
Andrin-jiro JIRAMA Ambohimanambola Manempotra ny mponina ny fofony
Manempotra ny mponina eny amin’ny manodidina ny fofona avoakan’ireo andrin-jiron’ny JIRAMA atobiny eo amin’ny fokontanin’Ampahimanga Ambohimanambola.